Ukufakwa Kwepayipi, Umhlinzeki Wezinto Zensimbi Engagqwali - HNR
I-HAINAR Hydraulics CO., Ltd. iqale ukukhiqiza ukufakwa kwepayipi le-hydraulics, ama-adaptha kanye nokuhlanganiswa kwepayipi le-hydraulic hose ngo-2007.
EN856 4SH – Ingcindezi Ephezulu Kakhulu, 4 Wire Spiral Hydrualic hose
I-ISO 16028-Face seal
Ukufakwa kwe-OEM Hydraulic
Kungakhathaliseki ukuthi uyinkampani ephethe ilungelo lobunikazi noma inkampani ethatha umkhiqizo usuka kumqondo uyiswe ekufezekeni, ukunemba nokunemba kubaluleke kakhulu ezinhlelweni zokusebenza Zokukhiqiza Izisetshenziswa Zoqobo. Ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo wokugcina ithuthukisa isikhathi sokumaketha nokwaneliseka komsebenzisi wokugcina, okuzuzisa wonke umuntu. Thuthukisa amandla akho okulawula uketshezi lwe-OEM ngokufakwa nama-adaptha avela e-Hainar Hydraulics. Imikhiqizo yethu yakhiwe ngensimbi engagqwali, eqinile, ehlanzekile futhi elwa nokucekelwa phansi. Ama-OEM Azuza Kanjani Kunsimbi Engagqwali? Uma kukhulunywa ngemikhiqizo yokukhiqiza, ama-OEM avame...
Ukufakwa Kwamathuluzi Kawoyela Negesi
Imboni kawoyela negesi isekela umphakathi wanamuhla. Imikhiqizo yayo ihlinzeka ngamandla kumajeneretha kagesi, ezindlini zokushisa, futhi inikeza uphethiloli wezimoto nezindiza ezithwala izimpahla nabantu emhlabeni wonke. Okokusebenza okusetshenziselwa ukukhipha, ukucwenga, kanye nokuthutha lawa manzi namagesi kufanele kumelane nezindawo zokusebenza ezinokhahlo. Izimo Eziyinselele, Izinto Ezisezingeni eliphezulu Imboni kawoyela negesi isebenzisa uxhaxha lwemishini ekhethekile ukuze ifinyelele izinsiza zemvelo futhi izilethe emakethe. Ukusuka ekukhishweni okuphezulu komfula ukuya ekusabalaliseni okuphakathi nomfula kanye nokucwengisiswa komfula, imisebenzi eminingi idinga isitoreji kanye ...
Inzuzo Yokusebenza Kokucubungula Amakhemikhali Njengoba izindawo zokukhiqiza amakhemikhali zisebenza ubusuku nemini, izindawo zokusebenza zihlala zithintana nezinto ezimanzi, ze-caustic, abrasive, kanye ne-asidi. Ngezinqubo ezithile, kufanele zimelane namazinga okushisa ashisayo noma abandayo futhi kube lula ukuzihlanza. Ukufakwa kwepayipi lensimbi engagqwali kwezicelo zemboni yamakhemikhali kunikeza izinzuzo eziningi. Lo mndeni wama-alloys asekelwe ku-iron uqinile, awukwazi ukugqwala, futhi uhlanzekile. Izici eziqondile zokusebenza ziyahlukahluka ngokwezinga, kodwa izici ezivamile zihlanganisa: • Ukubukeka kobuhle • Ayigqwali • I-Durab...